Somaliya oo dib xubin uga noqotey ururka boosaha aduunka iyo faaiidada ku jirta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Somaliya oo dib xubin uga noqotey ururka boosaha aduunka iyo faaiidada ku jirta
Somaliya ayaa dib uga mid noqotey ururka boosaha aduunka ee luqada qalaad loogu soo gaabiyo UPU kadib markii ay ka maqneyd muddo ku dhow 30 sano oo burbura. Somaliya ayay ka mamnuuc ahayd inay warqado dibedda u dirto mudadaas maadaama ayna jirin cid sii qaada.
Ururkan boosaha aduunka ayaa ah farac ka mida Hay’addaha Qaramada midoobey waxana la aasaasey muddo aad u fog, waxana qayb ka noqon kara wadan kasta oo ku jira qaramada midoobey, haddii kale waxay noqonaysaa in Somaliya dalkasta la gasho heshiis booseed.
Faaiidada ugu weyn ayaa ah in waraaqaha Somaliya ka yimaada gobolkasta la saari karo diyaarad kasta oo dalka ka baxaysa.
Wasiirka boostada Cabdi Cashuur Xasan ayaa u mahadceliyay madaxda hay’ada boosaha, ayadoo dawlada Somaliya bixisay lacago aruurey oo hay’adu wax ku kala dabarto iyo ribo fuushey mudada burburka. Waxa hore wasaaradu dib u soo ceshatay xiriirka isgaarsiinta ee khadka internet iyo hawada dalka.